Vernee M5 famerenana: karazana, endri-javatra, vidiny ary sary | Androidsis
Vernee M5 famerenana
Amin'ity indray mandeha ity izahay no mitondra anao a Vernee M5 famerenana, terminal farany ambany izay vidiny akaikin'ny € 100 Manome antsika fampisehoana mahaliana kokoa ho an'ireo mpampiasa izay tsy mitaky fahombiazana avo lenta izany. Ny endriny milamina miaraka amin'ny toetra ara-teknika ambonin'ny fanantenana (4 GB RAM, 64 GB ROM) dia mahatonga ity fitaovana ity ho safidy tena mahaliana ho an'ireo izay te hanana finday ary tsy handany mihoatra ny € 100. Tsy terminal hampiala ny olona amin'ny fitiavana izany fa mihoatra noho izay azontsika antenaina amin'ireo terminal any amin'ity faritra ity. Andao hojerentsika amin'ny antsipiriany ny toetrany, ny tanjany ary ny fahalemeny.
1 Fampisehoana sy famolavolana Vernee M5
2 Toetra ara-teknikan'ny Vernee M5
3 Fakan-tsary Vernee M5 sy mpamaky rantsantanana
4 Fahaleovan-tena sy fifandraisana amin'ny Vernee M5
7 Galerie Vernee M5
Fampisehoana sy famolavolana Vernee M5
La Ny efijery M5 dia 5.2 santimetatra miaraka amin'ny tontonana IPS, vahaolana HD (1280x720p) ary ny curve 2.5D eo amin'ny sisiny. Na dia ny terminal mahazatra 5.5 aza dia misy ny fatra mahazatra, ny tena marina dia tadiavin'ireo mpampiasa izay tsy mila efijery lehibe kokoa ny finday avo lenta toy izany fa mankasitraka ny fampihenana ny vidiny faran'izay betsaka. Ary zavatra aseho izany, nanomboka ny lanjany farany an'ny Vernee M5 dia 145 grama fotsiny ary eo am-pelatanana dia maivana be, toa kely aza ny lanjany.
Tsotra ny famolavolana fa mahonon-tena. Tsy terminal izay hampiaiky volana antsika ny sariny fa manome endrika endrika minimalist miaraka amin'ny 6,9 milimetatra fotsiny izy ary matevina ary mahafeno izay tadiavin'ny mpampiasa an'ity faritra ity. Ny trano dia misy amin'ny loko mainty na manga, izy io famaranana metaly ary mahafinaritra be ny mikasika azy.
Toetra ara-teknikan'ny Vernee M5
Amin'ny haavo fampisehoana, ny Vernee M5 dia manome mihoatra ny vidiny miaraka aminy RAM 4 GB sy ROM 64 GB. Miaraka aminy ny MTK6750 Octa Core 64-processeur Mihazakazaka amin'ny 1.5GHz, ny ARM Mali-T860 GPU sy ny rafi-piasa Android 7.0 dia manao izay hampandeha tsara ny faran'ny terminal ary afaka mitantana mora ny fampiharana somary mavesatra. Zava-dehibe ny manamarika fa ny rafitra miasa dia miorina amin'ny Android 7.0 Nougat ary mampiditra ilay vaovao Vos fanaingoana VOS izay novolavolain'i Vernee.
Andao hojerentsika amin'ny antsipiriany ireo fiasa sisa amin'ilay maodely:
Operating System Android 7.0 miaraka amin'ny sosona fanaingoana VOS
efijery 5.2 "IPS miaraka amina piksela 1280x720p pixel sy teknolojia 2.5D
processeur MTK6750 Octa Core 64-bit mandeha amin'ny 1.5GHz
Conectividad «SIM Dual Bluetooth 4.0 Wifi GPS. Tambajotra: 2G: GSM 850/900 / 1800MHz 3G: WCDMA 900 / 2100MHz 4G: FDD-LTE 800/1800/2100/2600MHz»
Fitaovana hafa Fitaovana fantsom-baravarana eo ambadiky ny faran'ny terminal - Fivarotana akaiky - Fehitera hazavana - Fahazavana sensor
vidiny 100 euro ao amin'ny TomTop
Fakan-tsary Vernee M5 sy mpamaky rantsantanana
Ny M5 dia miaraka amina fakantsary lehibe 13MPX misy taratra LED ary aperture f / 2.0 izay ahafahanao maka sary tsara kalitao, loko maranitra ary tena marina. Ny fakan-tsary eo aloha dia 8 megapixels, mihoatra ny ampy hanaovana selfie. Ny mpamaky ny dian-tànana dia hita eo ambanin'ny fakantsary lehibe ary mampiditra fanekena 360º sy hafainganam-pandeha 0.1 segondra.
Fahaleovan-tena sy fifandraisana amin'ny Vernee M5
Noho ny fonosana bateria 3.300 mAh, manome ny a Vernee M5 a fizakan-tena 10 andro amin'ny maody mailo ary 13 ora amin'ny fampiasana feno. Amin'ny haavon'ny fifandraisana, dia misy WiFi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.0 ary GPS, ary koa fahan'ny micro USB 2.0 ary fahan'ny jack 3.5mm ho an'ny headphone.
RAM 4 GB sy ROM 64 GB
Manitsy ny fampisehoana fotsiny
Galerie Vernee M5
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Vernee M5 famerenana
lakolosy eugenio dia hoy izy:
lahatsoratra tsara ,,
Mamaly an'i eugenio campana
Ny tsipiriany voalohany sy ny sary an'ny Xiaomi Redmi Note 5 tafaporitsaka
Ny Honor V10 dia ofisialy izao: Fantaro ny fampiasa azy